Ku Kordhi saamaynta ay kugu yeelanayso Warbaahinta Bulshadu adigoo adeegsanaya Qalabka Macluumaadka Casriga ah ee Unmetric | Martech Zone
Ku Kordhi saamaynta ay kugu yeelanayso Warbaahinta Bulshaduhu Qalabka Casriga ah ee Unmetric
Isniin, February 9, 2015 Isniin, February 9, 2015 Douglas Karr
Adduunyada oo ganacsiyada badankood 'ballaadhinta khadka tooska ahi ay ku tiirsan yihiin dhaqdhaqaaqyadooda isku-xidhka bulshada, horumarinta istiraatiijiyad baraha bulshada ah ayaa noqon karta caqabad run ah Hase yeeshe awoodda layaabka leh ee suuqgeynta warbaahinta bulshada ayaa ku sii wadaysa ganacsiyada xagga wadooyinkan inay soo jiitaan rajada oo ay kordhiyaan wacyiga sumadda.
La xiriirida isbalaarinta istiraatiijiyadda warbaahinta bulshada ee degdegga ah, a 2013 daraasad ay sameeyeen Linkedin iyo TNS ayaa shaaca ka qaaday in 81% SMBs ay hada adeegsadaan shabakadahan si ay u wadaan koritaanka ganacsiga, iyadoo 61% ka mid ah ay arkeen faa iidooyin la taaban karo marka loo eego helitaanka macaamiil cusub. Si kastaba ha noqotee, si aad u hagaajiso muuqaalkaaga astaanta u ah dhagaystayaasha bartilmaameedka ah, waxaad u baahan tahay istiraatiijiyad halkii aad ka ahaan lahayd ficil waana halkaan Cabir la'aan boodayaa
Maareynta Xogta Halis u ah Istaraatiijiyada Mawduuca
Cabir la'aan waa xog Analytics Mashruuc ujeedkiisu yahay in lagu xoojiyo joogitaanka warbaahinta bulshada ee magacyada iyada oo la siinayo noocyo xog ah oo ku habboon waqtiga dhabta ah. Laga soo bilaabo kormeerka qoraalada waxqabadka ugu sareeya ilaa falanqaynta tartame, qalabku wuxuu adeegsadaa qiyaaso kala duwan si loo ururiyo noocyada xogta ganacsi gaar ah laga yaabo inuu helo midka ugu qiimaha badan. Sidan, magacyadu waxay u habeyn karaan istiraatiijiyad warbaahinta bulshada taageerta xogta taas oo u taagan fursado badan oo lagu soo jiito macaamiishooda bartilmaameedka ah.
Fikradda ayaa ah in la hagaajiyo dhammaan howlaha muhiimka ah ee la xiriira abuuritaanka iyo meeleynta si loo abuuro qulqulo joogto ah oo hoggaamiyeyaal aamin ah. Adiga oo ku siinaya fikrado ku saabsan noocyada qoraalladu ay wadaan inta badan ka-qaybgalka iyo soo bandhigidda wada-hadallo khuseeya beelaha la bartilmaameedsanayo, Cabir la'aan waxay u saamaxdaa noocyada inay fahmaan akhlaaqda dhagaystayaashooda waxayna u adeegsadaan aqoontaan inay abuuraan waxyaabo saamayn badan leh.
Sidee Unmetric u shaqeeyaa
Maaddaama mid ka mid ah caqabadaha ugu waaweyn ee ka jira baraha bulshada ay abuureyso waxyaabo ku kalifaya, Cabir la'aan waxay damacsan tahay inay tan fududeyso iyadoo ku siineysa dhiirigelin, falanqeyn deg deg ah, iyo sidoo kale gaaritaanka qoraalo gaar ah. Qaybta Inspire waxay tixgelineysaa horey u doorbidida shirkad gaar ah si ay u muujiso qulqulka qoraalada ugu caansan.
Tallaabada dheeraadka ah waa falanqaynta tartame, halkaas oo barta ay ku ogeysiineyso marka qoraal gaar ah, sawir ama fiidiyow uu bilaabo inuu helo qadarin aan caadi aheyn oo khadka tooska ah ah. Tani waxay siisaa fursad deg deg ah oo ah ama ka mid noqoshada doodda socota ama si fudud u daawada sida macaamiisha u dhaqmaan.
Intaas waxaa sii dheer, mid ka mid ah dhinacyada Cabir la'aan waxay u qaadaysaa heer gebi ahaanba cusub waa falanqayn iyo ka qaybqaadasho hawlgal ah oo saldhig u noqon doonta qorshaynta tallaabooyinka mustaqbalka ee shirkadda. Qaybta 'Highlights' waxay u taagan tahay nidaam si dhakhso leh u aqoonsanaya walxaha ama astaamaha si dhakhso leh u helaya feejignaan si ay ugu suurtageliyaan sumadaha inay la xiriiraan dhammaan wadahadallada socda.
Fikrad - Isbarbardhig - Falanqee
Aruurinta iyo falanqaynta xogta waxqabadka leh waxay noqon kartaa geedi socod adag oo shirkado badan ay u arki karaan waqti lumis. Si kastaba ha noqotee, kormeer joogto ah oo ku saabsan isbeddellada warbaahinta bulshada, noocyada ayaa si fudud u aqoonsan kara fursadaha muhiimka ah waxayna ka dhigayaan geeddi-socodka qorshaynta waxyaabaha iyo u-habeynta mid aan dhammaystirnayn. Iyada oo loo marayo interface dareen leh, Cabir la'aan waxay soo gudbisaa qaybo muhiim ah oo macluumaad ah oo muhiim u ah faafinta saamaynta bulshada ee shirkad gaar ah.
Iyadoo la tixgelinayo muhiimadda sii kordheysa ee naqshadeynta istiraatiijiyadda warbaahinta bulshada si looga codsado tirada ugu badan ee isticmaaleyaasha bartilmaameedka ah, ganacsiyada yaryar ayaa la filayaa inay diiradda saaraan kanaalladan si ka badan sidii hore. Cabir la'aan ujeedadeedu tahay in la badbaadiyo suuqleyda waqtiga lagama maarmaanka u ah qorshaynta iyo hirgelinta istiraatiijiyadda warbaahinta bulshada iyo in shirkado badani awood u yeeshaan inay noqdaan xubno caan ah oo ka tirsan bulshada warbaahinta bulshada.
Tags: falanqee waxyaabaha bulshadaistiraatiijiyadda contentabuuro waxyaabo ku kalifayafalanqaynta warbaahinta bulshadaistiraatiijiyadda warbaahinta bulshada iyo waxyaabaha ay ka kooban tahaysaameynta warbaahinta bulshadamadal warbaahinta bulshadaaan qiyaas lahayn
Xirfadlayaasha Warbaahinta Bulshada ayaa Kharibay Warbaahinta Bulshada
Hayso Podcast? Ha iloobin Calan Micne ah!